आखिर नग्न योग किन गरिन्छ ? - Kaiphiyat
Home जीवनशैली आखिर नग्न योग किन गरिन्छ ?
आखिर नग्न योग किन गरिन्छ ?
यदि तपाईं एक्लो योग गर्दै हुनुहुन्छ भने सोलो पोजमा रहनुहोस् । गलत आसनले पनि क्षति निम्त्याउन सक्छ। नग्न योग गर्नुअघि, म्याट फैलाउनुहोस् र नुहाएपछि मात्र यो योग गर्न सुरु गर्नुहोस् । यो शारीरिक तथा मानसिक लाभ हाँसिल हुनेछ। नग्न योग वास्तवमा शरीर र दिमागका लागि राम्रो मानिन्छ। यो हाथायोगिसको उपहार हो। यस लेखमा वा प्रशिक्षकको सल्लाहमा दिइएका तरिकाहरू अपनाएर नग्न योग गर्नुहोस्। अनलाइन खबरबाट
गुल्मीमा बालविवाहविरुद्ध गाउँगाउँमा सडक नाटक
गुल्मी : मालिका गाउँपालिकाले उमेर नपुगी विवाह गर्नु हुँदै भन्ने जनचेतना जगाउन सडक नाटक देखाउँदै आएको छ। अझै पनि उमेर नपुगी विवाह गर्ने चलन रहेकाले...